အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သူရ ဦးအောင်ကိုတင်ပြ မြန်မာနိုင်ငံ တရားရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ ပြည်သူလူထု ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးအောင်ကိုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ဒီကနေ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ 2012-08-10
တရားစီရင်ရေးကို ခေတ်ပြောင်းတိုင်းပြောင်းလဲခဲ့ကြတာဘဲ။ ကြေနပ်မှုမရခဲ့ဘူး။ အသုံးချခံအဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလို့ပါ။ လူနဲ့မဆိုင်ပါ။
တရားသူကြီးတချို.ဟာဥပဒေရဲ.အထက်မှာရောက်နေတာကြာပါပြီ၊တိုင်းပြည်ရဲ.ဂုဏ်သိကာအတွက်လုပ်သင့်နေတာကြာပါပြီ၊သက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ.ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ.၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို.မျော်လင့်ပါတယ်၊အပြစ်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဖို.လိုအပ်ပါတယ်၊ရာထူးချပစ်ရုံ၊ဖြုတ်ပစ်ရုံနဲ.မလုံလောက်ပါဘူးတရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှတရားမျှတမှုရှိမှာပါ၊အပြစ်မရှိသူတွေကိုအပြစ်မရှိ ရှိအောင်လုပ်ပြီးထောင်မကျ ကျအောင်ချခဲ့ကြတယ်၊အပြစ်ရှိတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ကြမလဲ......?
Wise speech come from the stupid dog's mouth.
Aug 20, 2012 08:42 PM
Aug 12, 2012 01:49 AM
Thats good,here the the judge already waiting for Army's (or)general's command. What it will doing?
Aug 11, 2012 04:07 AM